खर्च टार्न नसकेपछि नेपालका हात्तीहरु भारतमा बेचिदै! « News24 : Premium News Channel
खर्च टार्न नसकेपछि नेपालका हात्तीहरु भारतमा बेचिदै!
चितवन । कोरोना महामारी सुरू भएदेखि कामविहीन बनेका सौराहा हात्तीहरु बिस्थापित हुन थालेका छन । नेपालको पर्यटन क्षेत्रका लागि पनि आकर्षणको पक्ष बनेका हात्ती प्रति सरोकारावाला निकाय अनुदार बन्दा नेपालका हात्ती छिमेकी मुलुक भारतमा बेचिन थालेका छन् ।
सौराहामा निजी क्षेत्रमा ६५ हात्ती रहेपनि पाल्न मुस्किल रहेको भन्दै हात्ती भारततर्फ पठाउन थालिएको छ । विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण जारी निषेधाज्ञाले गर्दा पर्यटक घुम्न आएका छैनन् ।
पर्यटक घुम्न नआउँदा बेकामे बनेका हात्ती पाल्न सौराहाका पर्यटन व्यवसायीलाई हम्मे भइरहेको छ । महिनाकै एक लाख रूपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने हात्ती पाल्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले कामविहीन मान्छेहरूलाई राहत बाँडिएजस्तै सौराहाका हात्तीहरूलाई पनि राहत बाँडन जरुरी भएको हात्ती व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
सरकारले हात्ती पाल्न सहयोग गर्ने आश्वासन पटक पटक दिएपनि नजिकै रहेको निकुञ्जमा जान समेत दिदैन् । यहाँका ब्यवसायीले निकुञ्ज भित्रको घाँसे मैदान ब्यबस्था गर्न सहयोग पुर्याउदा समेत निकुञ्जले निजी हात्ती प्रबेशमा रोक लगाएको छ ।
सरकार वा अन्य कसैले दैनिक २५० किलो घाँस मात्रै दिने हो भने पनि हात्ती बिस्थापित हुनबाट बँच्ने हात्ती ब्यवसायी वताउँछन् । हालसम्म दर्जन भन्दा बढी हात्ती छिमेकी मुलुक भारतमा बेचिएका छन् । यहाँका ब्यबसायीले एउटा हात्तीलाई ८० देखि ८५ लाख भारतीय रुपैया सम्ममा बिक्रि गर्ने गरेका छन् ।
६५ हात्ती सञ्चालन गर्दै आएको सौराहाको युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्था अन्तर्गत अहिले ४० भन्दा कम हात्तीहरु छन् । यदि सरकारले आफैले दिएको आस्वासन मात्रै पूरा गरिदिए हात्ती पाल्न समस्या नहुने बताउँदे आएका हात्ती व्यवसायको बारेमा स्थानीय सरकार भने केही बोल्ने गरेका छैन ।